Ipeyinti yeThermoplastic Preheater Abavelisi | I-China Thermoplastic Paint Isifudumezi seFektri kunye nabaxhasi
—— Isixhobo sokwenza ipeyinti sokufudumeza Thermoplastic
I-LXD500 Hydraulic Double Cylinder Thermoplastic Preheater (Ukupaka phantsi komhlaba)
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wombane wesilinda esiphindwe kabini we-thermoplastic preheater. Yenzelwe indawo yokupaka, uluntu, kunye nenye indlela encinci. Inezibonelelo zokusebenza ixesha elide, ukusebenza ngokulula, kunye nokugcinwa okulula, njl.
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wombane wesilinda esisilinda esisodwa sokufudumeza umzimba. Sesinye sezixhobo eziphambili kulwakhiwo lokumakisha indlela. Ukudityaniswa kwe-Multipath ukudluliselwa kwe-hydraulic kunye nesantya esingafaniyo sokuyila esinokuvelisa amandla amakhulu, ukuqinisekisa ukuba umatshini unokusebenza kakuhle phantsi komthwalo onzima.
LXD1200T / 1200B Hydraulic Cylinder Double Thermoplastic Preheater (Amafutha: Idizili okanye i-LPG)
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wombane wesilinda esiphindwe kabini we-thermoplastic preheater. Ihlaziywa kwi-LPGthermoplasticpreheater, enenzuzo elula, eyongayo, kwaye esebenza kakuhle. ilungele ngokukodwa indawo enomoya onamandla.
LXD1200JT / 1200JB Uhlobo lokonga umbane ngesanti kubunzulu baphantsi Cylinder Isicoci Preheater
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wohlobo olonga umbane ngesanti kubunzulu baphantsi ngesilinda esiphindwe kabini sombane. Sisizukulwana esitsha sombushushu wangaphambili we-thermoplastic, oxhotyiswe ngombane omtsha, isixhobo esonga umbane kunye nesitshisi esisebenza ngokukuko esinokukunceda ugcine malunga nesinye kwisithathu sepetroli. Khetha ngoko ukukunceda wenze imali ngakumbi.
LXD1200 / 800 Hydraulic Cylinder Thermoplastic Preheater
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso weLXD1200 / 800 hydraulic cylinder double preheater. Ukudityaniswa kwe-Multipath ukudluliselwa kwe-hydraulic kunye nesantya esingafaniyo sokuyila esinokuvelisa amandla amakhulu, ukuqinisekisa ukuba umatshini unokusebenza kakuhle phantsi komthwalo onzima.
I-LXD300 Mechanical Isilinda Esinye Isingxobo sePeyinti esiThambileyo
Singumvelisi omkhulu ngobukhulu wase China kunye nomzi mveliso wombane wokuqala wesilinda yepeyinti yokuthambisa. Izixhobo ezinamaxabiso aphantsi zilula kwaye zincinci, yiyo loo nto yenza ukuba kube lula kwaye kube lula ukuthuthwa. Ingasetyenziswa kwiiprojekthi zokwakha zesikali esincinci njengeendawo zokupaka, indawo yokuhlala, ukunyuka komzi-mveliso kunye namazibuko, njl.
LXD600 Mechanical Double Cylinder Thermoplastic Ipeyinti Preheater
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wombane wesilinda ephindwe kabini yepeyinti yokuprinta. Yamkelwa kwindlela yokuqhuba ngoomatshini, ubungakanani obuphakathi besilinda enyibilikayo, kunye nokungenisa isitshisi sokusebenza ngenaliti. Inamancedo okusebenza okuthembekileyo, ukusebenza ngokukuko, ukusebenza ngokulula, kunye nolondolozo olufanelekileyo.